Miyaad i tusi kartaa sida taxanaha Google ula xariiro macluumaadka dhabarkeyga?
Tobankii sano ee la soo dhaafay, saamigii libaax ee milkiilayaasha goobta iyo kuwa websaydhku waxay leeyihiin waxyaabo aad u ballaadhan oo ah spammy iyo backlinks khiyaamada - oo dhan oo dhan aawadood oo ah jagooyinka sare ee sare ee SERPs Google. Natiijo ahaan, qiyaastii shan sano ka hor mashiinka raadiyaha waaweyn wuxuu soo saaray cusboonaysiinta ugu horeysay ee Penguin algorithm - si loo bilaabo ciqaabista iyo u-dhajinta dhowr PBNs (shabakadaha khaaska ah ee blogga), beeraha isku-xiran ee isdabajooga, isku-xirka gawaarida (is-weydaarsiga), iyo sidoo kale kordhinta calanka cas cas oo leh barta casriga ah ee loogu talagalay ujeedooyinka dhisidda. Taasina waa sababta xitaa wax yar oo ka imanaya Tilmaamaha Guud ee Google ee khuseeya khadka tooska ah, spammy ama dib-u-qabsashada ayaa hadda ku tuuri kara boggagaaga ama blog-kaaga xabsiga rigooriga ah.
Google wuxuu ku dhahaa Xiriiro Wanaagsan ee Ka Dhexeeya Badbaadada
Waxyaabaha ugu horreeya ee muujinaya isku-dhaf adag oo u dhexeeya xogtaada dhabarkaaga iyo booska kore ee Google ee waa in Dunida casriga ah ee webka ah ayaa dhab ahaantii ka dhexjirtay xiriirrada. Tiradoodu waxay ka kooban yihiin robots online. Qaarkood waxaa loogu talagalay iibka bulkarka ama loogu talagalay in si shakhsiyadeed loo qiimeeyo heshiisyada sarrifka. Isla mar ahaantaana, xidhiidhada qaarkood waxay noqon karaan kuwo si fiican u habaysan si ay u eegaan sida dabiici ah ee ugu macquulsan, inta kale ee ka mid ah kuwa isku xira buugaagta. Sidaa daraadeed, caqabadda ugu weyn ee Google waa in la baaro xogta macluumaadka dhabarka bogga internetka ama blog - si loo fahmo cidda ciyaareysa ciyaar caddaalad ah oo xaqiiqdii waxay u qalantaa in ay kaalinta sare. Xaqiiqdii, marka makiinadaha raadinta waaweyn ee sida Google ah laftoodu ay u arkaan xidhiidh ay muujinayso sida ay u socoto websaydhkaaga ama blogka, waxaa jira seddex ikhtiyaar oo rasmi ah leeyihiin. Waxaan ula jeedaa in loo aqoonsan karo inay tahay mid ansax ah oo qiimo leh oo la tixgelinayo google-ka raadinta ee ugu weyn. Isla mar ahaantaana, wax waliba waa isku mid noqon karaan - oo xiriiriyeyaashaba waxaa loo aqoonsan karaa gebi ahaanba diidmo iyo waxba kama jiraan - iyada oo aan wax saameyn ah laga helin aragtida SEO. Ka dib oo dhan, website-kaaga ama blog-kaaga sidoo kale waa la ciqaabi doonaa, iyada oo la bixinayo qayb ka mid ah xiriiradaada xogtaada dhabarkaaga (ama kaliya hal xidhiidh oo gaar ah) ayaa laga shakisan yahay in ay tahay dabiici ama dabiiciga ah. Xaqiiqooyinka qabow ee ku saabsan Rankings iyo Backlists Database
Sidaas darteed, waxaa jira xiriir gaar ah oo u dhaxeeya booska dhabta ah ee SERPs iyo database kasta oo backlinks. Laakiin sidee baa loo adkeyn karaa? Halkan waa liistada dhibcaha rasmiga ah si aad u muujiso waxa xiriirrada dibadda ay ku sameyn karaan qiimeyntaada miisaanka.
jagooyinka sare ee SERPs waxay ku xiran yihiin tirada ilaha xiriirka qiyaastii 30 celcelis ahaan;
qiyaasta isku xirnaanta waxay u muuqan kartaa mid aad u qosol badan, iyada oo shuruudaha yar yar aysan ahayn mid la yaab leh - iyadoo tixgelinaysa in Google uu ku tiirsanaan karo qiyaastii 200 calaamado liiska;
in ka badan 99% dhammaan bogagga iyo blogyada oo ay dib u eegis ku sameeyeen daraasadda kiis ee dhowaan la helay ayaa u muuqda in ay leeyihiin ugu yaraan hal xiriir oo dibadda ah;
qiyaastii 22% boggaga shakhsiyadeed ayaa laga helay meel wanaagsan oo aan dib loo eegin dibadda;
in xiriiro badan ay la xiriiraan meel sare, laakiin ku qaybi lambarkooda halkii tayada aysan macnaheedu ahayn macnaheedu waa website-kaaga oo lagu tusi doono sare ee raadinta Source .